QupZilla, isiphequluli esikulindile. | Kusuka kuLinux
QupZilla, isiphequluli esikulindile.
Leo | | Aplicaciones, I-GNU / Linux
Ukubuka okuthunyelwe kwakamuva mayelana Konquark Ngakhumbula ukuthi isikhathi eside ngangifuna ukubhala ngomhloli we-inthanethi ongimangazile.
Esikhathini esedlule ngafaka kokunye kwami ​​ukwahlukanisa ku- Chakra nelangabi lalo KDE.
Kepha ngikuqaphelile lokho URenkonq bekuhamba kancane lapho upheqa iwebhu (Vele bengikufanisa neFirefox ku-Arch yami neXFCE kepha kuhle…). Into ukuthi, bengingacabangi ukufaka Konquark ukuthi bengivele ngiyamazi noma Firefox ngoba ku-Chakra kufanele ufake ama-megabyte angeziwe.
Yebo, upheqa ikhonsoli ngemuva kwe- pacman -Ss (Ngicabanga ukuthi ngafaka "isiphequluli sewebhu"), ngazithela QupZilla. Okokuqala ngicabange ukuthi bekuwuhlobo oluthile lwemfoloko yakudala yeFirefox, kepha ngithole ithuba.
Ngesikhathi ngiyivula ngangihlaba umxhwele ngejubane layo, ubuhle bayo futhi okuhle kakhulu ukuthi iyalungiswa kakhulu.
Ngizogqamisa ezinye zezici zayo:
Uye Adblock kufakiwe
Un Umfundi we-RSS kufaka phakathi (akukho ukufaka izandiso ezixakile).
Ingalungiswa ukuze Flash yenziwe yasebenza ngokuchofoza (njengoba kubonakala esithombeni) 😀
Kubhalwe ku Qt4 okwenza ibe yinhle ku-KDE.
Mina (umbono womuntu osobala) ngibukeka ngizinze kakhulu kunoRekonq.
Ngokwekhasi oficial itholakala futhi ngeWindows.
Yebo-ke inakho konke abanye abahloli bamazwe abanakho, kepha kuyashesha, isebenzisa izinsizakusebenza ezimbalwa futhi angibanga nezinkinga naye 😀
Ukuze izithombe ze-Flash zisebenze ngokuchofoza, iya kokuncamelayo> izandiso> ama-plugins weWebKit.
Ngiyincoma ukuthi uyizame, wazi okuthile okuhlukile futhi uthole okudala okudala okufanayo (iFirefox, iChannel / iChromium nenkampani) ikakhulukazi ku-KDE.
Izinketho ziningi futhi kubonakala sengathi kusenokuningi ongakuthola ...
Ukufaka vele usuyazi: "umyalo kuye nge-distro" + qupzilla.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » QupZilla, isiphequluli esikulindile.
Amazwana ayi-40, shiya okwakho
Njengamanje ngiyayihlola (kanye futhi) futhi ngimangalisiwe ngejubane lalesi siphequluli. Manje, njengenjwayelo kukhona u- "kodwa" ...
Kubonakala kimi ukuthi kuyinkinga yeWebkit, kepha kukhona izinqamuleli zekhibhodi ezingangisebenzeli, ngokwesibonelo kusihleli seWordPress. I-Ctrl + Enter ukuqedela ngokuzenzakalela .com nayo ayisebenzi kimi.
Emzuzwini edlule ibivaliwe kimi, angazi ukuthi kungani, futhi inezinketho ezimbalwa kakhulu zokwenza ngokwezifiso, kepha woza, ihamba njengesibhamu maqondana nokuzulazula. I-Facebook, i-Gmail namanye amakhasi avulwa ngaphandle kwezinkinga 😀
Okuxakile, bengikusebenzisa ngokunganaki ukwenza lokhu kufakwa okufanayo futhi bekuyi-10, umhleli weWordPress wayeqephuza kakhulu futhi akumkhathazi ukuba namathebhu amaningana.
Kepha hhe, angishongo ukuthi iphelele futhi 😉
Ngisamile ekutheni kuyindlela enhle futhi ngihlala ngiyisebenzisa eChakra (kepha njengoba manje senginqena ukulinda i-KDE iqale, ngiphawula kusuka ku-Arch ngeXFCE 🙂)
Angizange ngiyithande nhlobo lapho ngiyizama kudala futhi noma kunini lapho ngifuna isiphequluli esisha, ngicabanga ukuthi yingakho ngingawushiyi umlilo firefox: 3 ukuthi akekho omunye ongikholisa kakhulu ukuthi ngiwushintshe, ukuntuleka kwezandiso Futhi kubonakala sengathi akushiyi i-alpha yaphakade: \_ state, yize ukuhlanganiswa kwayo ne-KDE kungimangazile kepha ngaphezu kwalokho, angicabangi ukuthi kuzonikeza elinye ithuba 😐
Ake sibone ukuthi kwenzekani nge-Opera, bazoshintshela ku-WebKit.
Ngiyethemba ukuthi aziphindiseleli emuva.
Izothuthuka, ngaphandle kokungabaza. Ngikhathele ukubona leso sibonakaliso esithi "Usebenzisa isiphequluli se-f ***, sicela uthuthukele ku-Chrome." Okubi, kuma-KDEeros amaningi, ukuthi iWebkit ifaka i-gtk.
Ngalokho kukhona itheku, qwebkit
engeza ku-useragent esebenzisa i-webkit futhi amakhasi amaningi kufanele akusebenzele. isibonelo i-Google +
Akulona icala lami ngoba angiyisebenzisi i-KDE.
Ngiyethemba ukuthi ushintsho aluthinti ukusebenza noma lukwenze lube nzima.
Lelo iphutha le-google spam
UBob Fisher kusho
Sizoyibheka, sibone ukuthi isebenza kanjani kuKubuntu. Kuhlala kukuhle ukuzama ezinye iziphakamiso zokuzulazula zamahhala.
Phendula uBob Fisher
okuwukuphela kwento mhlawumbe engiyikhumbulayo kulezi ziphequluli ezingathandeki izandiso ... ngokwesibonelo ngisebenzisa i-lastpass kakhulu phakathi kwabanye
I-Lastpass? Ingabe kuphephile ukunikeza amaphasiwedi kuseva?
Ngibuza ngoba bengingamazi futhi uyangithanda.
Yebo, ukuze ezokuphepha zinambithe imibala hehehe kuzoba nabaningi abazokutshela ukuthi akunconywa ukwenza lokhu, mina uqobo ngifuna ukucabanga ukuthi kunjalo nokuthi inkampani ibhala ngemininingwane ngempela leyo datha futhi ngeke ibabheke.
Ubuhle balokhu ukuthi ungaba nawo wonke amaphasiwedi wakho aphephile endaweni eyodwa futhi ngokubeka isandiso ku-chrome / chromium, opera, firefox njll. Uzokwazi ukufinyelela kuwo.
Ngokombono wami, noma ngabe i-KDE ine-kwallet enokuziphatha okufanayo kodwa okwasendaweni kuphela, kuyasebenza kakhulu uma uphatha ama-akhawunti amaningi kuma-PC ahlukile.
engxenyeni yami ngiyayincoma yize abaningi bezothi cha nabanye bathi yebo ... ngakho-ke into enhle ukuzama ukubona ukuthi ucabangani
Ubungazi ukuthi uSeguro waboshwa!?
Ubuhle beLastpass ukuthi uhlelo lokusebenza lubethela amaphasiwedi emshinini wakho bese luwathumela ngokuxhumeka okuphephile kumaseva alo. Uma ulahlekelwa yiphasiwedi yakho, ayikho indlela yokuthola idatha yakho ngoba idatha efanayo ibetheliwe -kufaka ne-password- ayikho indlela yokufinyelela i-akhawunti yakho futhi.
Kusukela ngemuva kokunqoba ukungabaza kwami ​​kokuqala ngithole ukuthi iLastpass ingenye yalezo zandiso / izinhlelo zokusebenza / amathuluzi ayisisekelo ngempilo yami eku-inthanethi: ayenzi nje kuphela ukufinyelela kuwo wonke amasayithi adinga umsebenzisi obhalisiwe kunoma yimuphi umshini nanoma isiphi isiphequluli esisekela isandiso esincane , kepha lokho futhi kunebhonasi eyengeziwe yokukhiqiza amaphasiwedi ayinkimbinkimbi amasayithi lapho sibhalisa khona ngendlela enikeza ukuphepha kwamuva nokukhulu; asazi ngisho ne-password yokungena kuleyo sayithi, okungadingekile ngoba igcinwa ngokuzenzakalela ku-akhawunti yethu.
Uma usebenzisa inetha futhi ulisebenzisa kakhulu, ngincoma ukuthi uzame i-Lastpass.
Ngiyayithanda ne-lastpas, nginikeza i-rekonq 2.x ithuba elizuze ukuzinza futhi ngisebenzisa isikhwama sephasiwedi se-KDE.
Ngokuphathelene neQupzilla ngithanda enye indlela enhle kakhulu.
Iyafaka, noma ingekho endaweni yokuphumula Ubuntu.
Ukuhlolwa, iqiniso libukeka lilihle ekushintsheni i-ejenti yomsebenzisi kulula kakhulu, akukho-plugin noma imiyalo noma yini edingekayo.
Ihlola umenzeli womsebenzisi.
Ngibeka izithonjana kahle, kepha iwebhu ingitshela ukuthi ngisebenzisa iWindows oO
Kuyamangalisa lokho ... futhi kuyesabeka ...
Ngiyizamile ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, kepha ngaba nenkinga yokuthi ivalwe yodwa futhi kulokhu engikubonile bekungeyona yodwa eyenzeke kuyo.
sebenzisa i-greasemonkey. Angikaze ngazi ukuthi imibhalo ye-GM ethembekile kangakanani. yimuphi umbono?
I-Qupzilla isiphequluli esihle kakhulu. Ngaphambi kokuthi ibingazinzile impela kepha manje ithuthuke kakhulu.
Benza inguqulo entsha ku-qt5 😀
Vele isiphequluli silula futhi njengoba le ndatshana isho, ngokushesha. Kepha uma ngifuna ukuvula umlando, ukuhlela amabhukumaka noma ukuvula okuncamelayo, kuyabhajwa futhi kufanele ngiwuvale ngenkani, ngakho-ke akusebenzi kimi.
Bengifuna ukukuzama, sizobona ukuthi kwenzekani
Ngemuva kosuku lonke lokuhlola iQupzilla nginesiphetho:
- Iyashesha kuneFirefox, noma ngabe ezinye izinto zishoda .. futhi ngiyayithanda.
- Kepha ibuye idle okuningi .. nge-Qupzilla namathebhu ama-3 avuliwe ngafika ku-1.5 Gb ye-RAM, futhi ngeFirefox angangeqi ku-800MB ngaphezu kuka-4 ..
Impela, kunezinto eziningana ezisatholakali. kodwa uzivikela kakhulu. Futhi angazi ukuthi kungani, kepha noma ngabe bobabili iQupZilla, iMidori nabanye banqunyelwe, namanje iningi lethu liyabathanda
Sengike ngabona nokuthi baphawule nge-elink !!!! 0.0
Hmm, ngajabula kakhulu lapho usho ukuthi wawucabanga ukuthi imfoloko yeFirefox futhi ngibona ukuthi igama ligcina kuZilla, ngangicishe ngishaye i-toast ngenjabulo ... kodwa ngaphoxeka ngokushesha lapho ngifika engxenyeni ethi isebenzisa i-webkit.
Ngicabanga ukuthi ngizonamathela kwiFirefox yami enhle.
Alikho icala, kepha ngithole ukuthi iWebkit isebenza kangcono ku-HTML5 kune-firefox. Ngisebenzisa zombili.
Sawubona Leo, ngiyaxolisa ngokungalungile, uyazi ukuthi ngifuna ukukubuza umbuzo: I-ArchLinux ingcono nge-KDE noma i-XFCE futhi ngani? Ngiyazi ukuthi umbuzo awunjalo kepha ngiyethemba ungangenzela umusa wokuwuphendula. Ngiyabonga.
Bheka, kungcono ukuzama. Kusuka kokuhlangenwe nakho i-XFCE ne-LXDE zisebenza kahle kakhulu futhi zizinzile kakhulu e-Arch.
Kepha uma uzosebenzisa i-KDE, ngikweluleka ngokwami ​​ukuthi usebenzise i-Chakra, esekwe ku-Arch kepha ihlala kuphela ku-KDE naku-amd64 futhi ikhombisa okuningi.
Kepha ngiyagcizelela, umbono kuphela, kepha kungcono ukuzama ukuthola iziphetho zakho.
Kuhle kakhulu! Ngikubeka kanjani ngeSpanishi?
I-QupZilla isiphequluli esihle kakhulu, empeleni ngiyisebenzisa lapho i-chrome noma i-firefox ifaka imidiya eyinkimbinkimbi ngamanye amakhasi, njengalezo zokukhokha online.
Ukube iQupZilla ibinezinga lokuthuthuka nokunikela okufana nokwaziwa kakhulu, le ndaba ibizohluka. Kufanelekile ukucatshangelwa.
Ngiyilinge futhi ngiyizamile
Bengiyithanda impela kodwa ilenga kakhulu, njalo ngambili ngamathathu iyazivalela.
Ngiyisebenzisa ku-Mint 13 nge-Kde 4.10, angazi ukuthi kuzoba nokuthile okuhlangene nakho ...
Kepha kuhle kakhulu futhi kulula
Ingabe yimibono yami noma ayisekeli i-HTML5? Ngiyizamile ngephrojekthi yomuntu siqu engiyithuthukisayo futhi isigwebo esidingekayo asizange singisebenzele 🙁
Uma kungenjalo ngezandiso ezimbili, bengizoyisebenzisa.
I-Lastpass ne-Xmarks (njengabanye laphaya)
I-Polonium + abaholi abangakhululekile = abaholi abanomdlavuza kusho
Kushesha kakhulu, yebo, kepha okungenani kimi, lapho ngivule amathebhu amaningi (25 noma 30) ivalwa njalo kakhulu. Ngicabanga ukuthi inkinga yokuzinza idinga ukuthuthuka kakhulu, kepha-ke basendleleni efanele, kimina yisiphequluli sami sesibili ngemuva kweFirefox; I-Arora neRekonq basebenza kabi kimi, futhi iKonqueror kungcono ingasaphathwa… (yize kufanele iqashelwe ukuthi inguqulo ye-KDE 4.10 ithuthuke kakhulu). I-Qupzilla ayikabuyekezwa kusukela ngoSepthemba, asithembe ukuthi abawushiyanga lo msebenzi, ngoba bekuwukuphela kwethemba lesiphequluli esifanele esenziwe ku-QT.
Ukuphendula uPolonium + abaholi abangakhululekile = abaholi abanomdlavuza
Kulabo abayifunayo ku-Ubuntu noma ku-flia. kutholakala nge-launchpad:
i-sudo engeza-apt-repository ppa: nowrep / qupzilla
Ngikuyo futhi ngiyayithanda ngempela ...
Ukususa abasebenzisi ku-FromLinux
Isixazululo seChfn: Imvume inqatshiwe